छत्रमानलाई प्रधानसेनापति नबनाउन रामवरणलाई बाबुरामले दवाव दिएको खुलासा – YesKathmandu.com
मङ्गलबार ३०, चैत २०७२
काठमाडौं, ३० चैत । नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति छत्रमानसिंह गुरुडलाई प्रधानसेनापति नवनाउन डा. बाबुराम भट्टराईले तत्कालिन राष्टपति डा. रामवरण यादवलाई दवाव दिएको खुलासा भएको छ । पूर्वसेनापति छत्रमानसिंह गुरुडको पुस्तक विमोचनमा पूर्वराष्टपति यादवले आफुलाई एक पार्टीका ठुला नेताले गुरुडलाई प्रधानसेनापति नवनाउन दवाव दिएको बताएक थिए । म ति नेताको नाम त भन्न चाहान्न तर मलाई ठुलै दवाव आएको थियो पुस्तक विमोचन कार्यक्रममा यादवले भनेका थिए तर मैले जनजातिको छोरालाई प्रधानसेनापति बनाउन कसैको दवावलाई मानिन् ।
तत्कालिन एमाओवादीका नेतासमेत रहेका भट्टराईले गुरुडलाई प्रधानसेनापति नवनाउन आग्रह गरेका थिए । अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको आकांक्षा सुनाउँदै गुरुडलाई प्रधानसेनापति नवनाउन दवाव दिएको यादवले आफु निकटका ब्यक्तिहरुसँग बताएका छन् ।
यादवले संविधानसभा बिघटन नगर्न भट्टराईलाई सुझाव दिएको प्रसंग पनि उठाएका थिए । मैले बाबुरामजीलाई संविधानसभा विघटन नगर्नुहोस भनेको थिएँ तर उहाँले मान्नु भएन, विमोचन कार्यक्रममा भनेका थिए । पूर्वराष्टपति यादवको भनाईप्रति बाबुरामले आपत्ती जनाएका छन् । उनले मर्यादा र गोपनीयताको ख्याल गर्न यादवलाई सामाजिक सञ्चाल मार्फत सजग पनि गराएका छन् ।
नेपाल र नामिबियाको क्रिकेट खेलमा ६ सय प्रहरी परिचालन
खोटाङको भीरबाट यात्रृबहाक बस खस्यो, १३ जनाको मृत्यु
One thought on “छत्रमानलाई प्रधानसेनापति नबनाउन रामवरणलाई बाबुरामले दवाव दिएको खुलासा”
Murari Pratap Dhungana says:
It is very good that retired old horses are mud sledging each other.
आन्दोलनकारी र प्रहरीविच लहानमा झडप
जनयुद्धको उच्च लक्ष्य बाँकी ः प्रचण्ड
उपचार गर्ने वीर अस्पताल हिडेकी यी विरामी यसरी पुगिन बग्गीखाना
अदालतको आदेशको उल्लङ्घन
अस्पतालको बेडले फर्काएको शशांक र सुपात्राको पुरानो प्रेम
अबदेखि पशुपतिनाथ मन्दिर क्षेत्रमा सवारी साधनलाइ नो इन्ट्री
मधेसी नेताको थ्रेट पछि चुनावको मिति घोषणा गर्न हच्किए प्रचण्ड
मध्यराती नै वालुवाखानीबाट सीमलटारमा डेरा सरे बालकृष्ण ढुंगेल